I edume Porsche 911 ngesikhathi kuqala kuboniswe umphakathi ngo-1963, kuyilapho kungekho muntu ingaphikisana ngisho ukuthi imoto uzobe ngaphezulu ekhiqizwa eminyakeni engamashumi ayisihlanu. Yiqiniso, imoto ilungisiwe, ngcono, ngashintsha nokubukeka yayo futhi ukugxusha. Nokho, nabaqambi German babekwazi ukulondoloza ehlukile yasekuqaleni edume "frog". Futhi namhlanje, uma ubheka Porsche 911 2012, ungathola ukufana nalo izilwane zasemhlabeni ngamandla futhi emincanyana. Yini esafinyelelwa automakers isiJalimane, nokuthi namuhla ungathola umnikazi wesikhwama wajabula kakhulu imodeli 911? Uma sikhuluma Dynamics ukushesha, le yokunqoba 100 km / h ngoba version standard usevele kwenzekani ngemizuzwana 4.8 nje, futhi Turbo Porsche 911 icala le umshini wokubonisa izinga lejubane uphawu uya konke 3.4 imizuzwana. Ngesikhathi Mechanics efanayo abathandi kufanele elibanzi ukuqaphela izinzuzo Porsche-Doppelkupplung kunendawo enkulu engahlolwa amarobhothi simangalele-PPC (PDK). Ziphethe ikhishwe ngesikhathi ukusheshisa kuya ku-100 km / h ikumodi ezemidlalo ziphumelela kangcono ziqhathaniswa nezimbangi zazo mechanical isilinganiso 0.3. Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe usebenzisa PDK e Porsche 911 iyona nokwenza kahle petrol. Ngenxa umjovo yayo ngqo nabaqambi esesikwenzile sibalo eyamukelekayo ngempela kulolu imoto enamandla - 10.8 amalitha angamakhulu ngamunye umjikelezo elihlangene.
Amandla injini olusha Porsche 911 luyanda 20 amahhashi ne torque - kuze kufinyelele 390 N • m. Wafanisa nge izinguqulo ezandulele anda zlib isilinganiso, encishisiwe unhlangothi isilinda ngenkathi okwandisa ubukhulu babo, encishisiwe isisindo jikelele motor, wasebenzisa lubricating uhlelo nge "ezomile" sump. Engine eselulelwe nombala futhi ngokufanele basakaza yonkana ezahlukene rev. umakhi Auto linikeza amakhasimende ayo imoto nge ezingemuva-wheel futhi wonke-wheel drive. Ngaphezu kwalokho, naphezu kwalezi ziqinisekiso we abaklami wonke-wheel drive nguqulo ye torque ungakwazi idluliselwe ngokugcwele ngaphambili oluvala amasondo, kodwa ukuziphatha imoto endleleni eduze idrayivu ezingemuva-wheel.
Interior yokuqedela ngisho imishini eliyisisekelo elivezwa ezingeni eliphezulu kakhulu. Lena yindawo kwezinkuni elite kanye izinga okusezingeni lesikhumba. Ukusebenzisa polymers ngaphakathi ingaphakathi Porsche 911 incane. Ukuze Ergonomics izakhi ingaphakathi nzima ukuthola iphutha. Ikakhulukazi Kuyaphawuleka zihlalo oluhambelana. Ngenxa ukulungiswa kagesi lateral ukwesekwa isiguqo kanye backrest kungase kushintshwe abashayeli bazo iyiphi Yakha. Into nje yona le umqondo jikelele - umshini wokubonisa izinga lejubane uninformative. Naphezu kweqiniso lokuthi wezangaphakathi yakhelwe izihlalo ezine, esihlalweni ezingemuva is arcade esetshenziswa ngezinye izikhathi, ngoba kukhona aminyene ashisayo. Phatha bonke ukusebenza imoto, usebenzisa Porsche Ukuxhumana Management (the PCM), sibonga lula impela isikhombimsebenzisi yayo enembile bese uthinta kusebenziseka kalula esibukweni.
Ushayela imoto itholakala njengendlela ukulungele ngokukhethekile ngaye abashayeli, ngakho abashayeli evamile. Kulabo awakulungele ngoba ubunkimbinkimbi kanye lezimanga womshini enamandla, akukuhle ukunqamula i kuqiniswa uhlelo PSM futhi PASM ukumiswa asebenzayo ukuhumusha kumodi ezemidlalo. electronics Smart ukuqina emgwaqeni futhi cornering engaguquki kanyekanye ne ukukhuphula ijubane oyenza isebenze spoiler ngemuva, kukhawulwe supply fuel, ukuvimbela noma yimuphi ilele.